Guddoomiyaha Koomishanka Doorashooyinka Oo Wacad Ku Maray Inaanu Mucaaridku Ku Guulaysan Doorashadda Madaxtooyadda | Haatuf Media Network
Guddoomiyaha Koomishanka Doorashooyinka Oo Wacad Ku Maray Inaanu Mucaaridku Ku Guulaysan Doorashadda Madaxtooyadda
July 19, 2015 - Written by Admin Two
Hargeysa, clinic | July 19, 2015 (Haatuf) – Guddoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Somaliland C/qaadir Iimaan Warsame ayaa wacad ku maray in xisbiyada mucaaridku aanay ku guulaysan doorashadda madaxtooyadda Somaliland ee khilaafka wayni ka taagan yahay wakhtigii la buy viagra online qaban lahaa.
Mr Iimaan oo sidan ku sheegay kulan dhawaan dhexmaray isaga iyo dhawr qof oo kale ayaa waxa uu ka mid ahaa shantii xubnood ee Koomishanka ee dawladu soo magacawday, iyadoo ay waliba madaxtooyadu intay olole u the best choice best viagra gashay sidii uu u noqon lahaa guddoomiyaha Komishanka ay culays ku saartay labadii xubnood ee matalayey beelaha darafyada inay isaga uga hadhaan xilkaasi oo ay labadooduba quudaraynayeen. Ka hor intii aanu ka mid noqonin guddida doorashooyinka, C/qaadir Iimaan waxa uu ahaan jiray qandaraasle ku caanbaxay musuqmaasuq, taas oo sababtay in shirkadii dhismaha ee uu lahaa kacdo isla markaana dayman badan ku go’een.
C/qaadir Iimaan ayaa intii uu guddoomiyaha Koomshanka noqday waxa uu caadaystay inuu labadii todobaadba ugu yaraan hal jeer kalidii madaxtooyadda kasoo galo albaabka danbe ee koonfureed.
Dhinaca kale diwaangalintii cod-bixiyeyaasha ee ay Koomishanku hore ugu dhawaaqeen inay bilaabmi doonto todobaadkan ayaa hadda u recommended site viagra for sale muuqata in aanay ka fursanayn inay dib u dhacdo ka dib markii ay koomishanku ku fashilmeen inay dhamaystaan hawlihii loogu diyaargaroobi lahaa diwaangalintaasi oo sharcigu dhigayo in doorashadda la qaban-karo uun lix bilood ka dib marka la hirgaliyo diwaangalinta cod-bixiyeyaasha. Waxa kale oo iyaduna fashilantay diwaangalintii madaniga ahayd ee xukuumadu gaarka u wadatay, iyadoo ay soo shaac-baxeen astaamo muujinaya in dawladu ay canda-dawshay labada diwaangalinoodba si ay uga dhigato cimri-dherer ay doorashooyinka dib ugu dhigto.
Waxa kale oo ay ahayd in horaantii bishan la bilaabo barnaamijkii wacyi-galinta ee ka horayn lahaa diwaangalinta cod-bixiyeyaasha, balse hawshaasi lafteeda ayaa u dhaw inay fashilanto ka dib markii ay koomishanku hirgalinteeda ay qandaraas ku siiyeen lix NGO oon wax khibrad iyo aqoon-toona u lahayn wacyi-galinta bulsho balaadhan.
Sidoo kale koomishanka ayaa shirjaraa’id oo ay maanta qayb saxaafadda ka mid ah ugu yeedheen ka sheegay inay dhex-dhexaadin ka gali doonaan khilaafka ka taagan wakhtiga la qaban-doono doorashadda madaxtooyadda iyo wakiiladda. Koomishanka oo ah hay’adda u xilsaaran inay soo jeediso taariikhda la qabanayo doorashadda ayaa hore ugu astaysay 1-da June 2016-ka, taas oo ay ahayd in madaxwaynuhu digreeto ku soo saaro sida sharcigu dhigayo. Waxase dareeno shaki leh muujinaya oo ay shacbigu la yaaban yihiin mawqifkan cusub ee koomishanku kaga tanaasulayaan masuuliyadii iclaaminta wakhtiga doorashadda ee ay u xilsaarnaayeen.